डेटिङ जर्मन महिला डेटिङ वेबसाइट
तपाईं खोजिरहेका छन् प्रविष्ट गर्न यो साइट देखि एक असाधारण स्थान छ । भनेर पुष्टि गर्न यो साँच्चै तपाईं प्रविष्ट गर्नुहोस्, आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर । ‘तपाईं प्रयास भने, तपाईं दुई विकल्प छ: सफल वा असफल । र तपाईं के छैन प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यहाँ एउटा मात्र विकल्प छ।’ एक अनौठो कुरा, मानव सम्बन्ध, त्यहाँ छन् जो मानिसहरू सधैं छन् र जताततै, तर तिनीहरूले चोट एक सानो, र तिनीहरूले फेला केवल एक छ । दुई पटक मा जीवन छ । त्यहाँ मानिसहरू हुन् जसलाई असह्य देखि पहिलो, दोस्रो र सधैंभरि, यस्तो किन छ त्यहाँ छन्, एक धेरै अधिक. मान्छे छन् जसलाई. कुनै तरिका हो । तिनीहरूले छैनन्. तिनीहरूलाई एकदम धेरै. भीड भनिन्छ, र जस्तै मान्छे छन् जसलाई, र यो विचार र भावना नै हो । म जान उहाँलाई भेट्न खुला हतियार संग, र अर्कोतर्फ, एक व्यक्ति सबै विस्तृत खुला छ । भने अर्को. यो कहिलेकाहीं मारा हुनेछ छुट्टी हालको.
र यी मानिसहरू को सबैभन्दा बहुमूल्य छ । सबैभन्दा मनमोहक छ । मनपर्ने छ । बस गर्न कसरी सिक्ने हेरविचार तिनीहरूलाई छ । महिला एक फूल छ । र मानिस छ माली । माली उठ्छ र एक फूल छ । फूल बारी मा उहाँलाई धन्यवाद दिने, उहाँलाई आफ्नो कोमल र सुन्दरता छ । यो चिंताशील माली सबैभन्दा सुन्दर फूल । जब तपाईं चाहनुहुन्छ भनेर गुनासो गर्न प्रेम, अवस्थित छैन भनेर परिवार मानहरू लागि, सबै वरिपरि शिशु, भाग्नुलाई डरछेरुवापन, नक्कली, भन्दा र दर्पण मा हेर्न र लज्जित हुन. रचनात्मक को नतिजा एक जटिल छ मा हेर्न आफैलाई, छैन मा कसैले, किन यो असफल शनिबार रात. रचनात्मक को नतिजा हेर्न आफैलाई, छैन मा कसैले, ध्यान को दुनिया दुष्ट । रचनात्मक को नतिजा भएको एक मस्तिष्क गर्न लाग्छ, लाग्छ, एक सानो लाग्छ अलंकृत भन्दा. योग्य छैन. योग्य छैन. त्यहाँ न्याय को भाग्य, त्यहाँ छ एक सन्तुलन छ, एक व्यवस्था भने: बिहान पट्टाइ देखि, तपाईं यो योग्य बायाँ, एक क्याफे-जोडीलाई, क्रोइसैन, जाम संग र एक सुन्दर दृश्य. गर्न अनुसार प्रत्येक गर्न योग्य छ, प्रत्येक को, माइकल ज्याक्सन र मेदभेदेभ, सुनौलो शासकका र घरेलु कामदारहरूको, र रोशनी को कारण सबै योग्य, सबै अप गर्न अन्तिम भ्यागुता.
थिएन लिन टापुहरूमा. दिनुभयो भन्दा दुई सय र पचास हजार यूरो जान्छ औंला र सुने चटर्जी बारेमा मेरो पेसा हो । तपाईं, र औंलाहरु, र क्यारियर. ओह, कसरी मीठा यो क्षण मा जीवन को एक आधुनिक बासिन्दा को महानगरबारे छ बदली गर्न जिम्मेवारी को पहिलो दृश्य मा छ । जिम्मेवारी भविष्यको लागि र, को पाठ्यक्रम, को लागि पछिल्लो. लागि जिम्मेवारी, लागि लाखौं नपढिएको लागि, मडागास्कर, जो गए कहिल्यै किनभने, मडागास्कर, त्यहाँ छ भने टर्की-सबै-समावेशी हो । तपाईं पनि अल्छी थिए, चिन्ता, पनि अल्छी । पनि अल्छी थियो हाम फाल्न गर्न टाउको माथि छ । थियो पनि अल्छी पनि गर्न प्रयास गर्नुहोस् । तपाईं खोजे ।. निस्सन्देह, के भयो । बाबु, कति तपाईं प्राप्त. अत्याचार बुबा । र त, किन तपाईं हुनेछ. बस जान्न चाहनुहुन्छ, प्रति घण्टा.
के. पिताजी छोरा मा माथि देख्यो उहाँलाई धेरै गम्भीर आँखा । पिताजी, तपाईं उधारो मलाई । तपाईं सोधे, त्यसैले म दिनुभयो, तपाईं मुद्रा को लागि केही मूर्ख खेलौना छ । कराए । तुरुन्तै मार्च आफ्नो कोठा र ओछ्यानमा जान । तपाईं गर्न सक्छन् छैन हुन त स्वार्थी छ । म सबै दिन काम धेरै थकित छ, र तपाईं छौं त मूर्ख । बच्चा चुपचाप गए, आफ्नो कोठा र बन्द ढोका पछि उहाँलाई । तर आफ्नो बुबा जारी ढोकामा खडा हुन र पागल को अनुरोध मा आफ्नो छोरा छ ।»हिम्मत कसरी उहाँले मलाई सोध्न बारेमा तलब, त्यसपछि सोध्न लागि पैसा।»तर केही समय पछि उहाँले शान्त तल र विचार गर्न थाले:»शायद उनले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं किन्न आवश्यक छ । संग नरक गर्न, तिनीहरूलाई संग तीन सय, उहाँले अझै पनि साधारण कहिल्यै म पैसा सोध्न थिएन।», भन्नुभयो जब उहाँले प्रविष्ट नर्सरी, आफ्नो छोरा मा पहिले नै थियो ओछ्यानमा । तपाईं जागा, छोरा । उनले सोधे । कुनै, पिताजी. बस झूठ, त्यहाँ जवाफ केटा । म जस्तो पनि कठोर गर्न भने, तपाईं आफ्नो पिता भन्नुभयो । म छु थियो एक हार्ड दिन र म बस. म दु: खी छु । यहाँ, पैसा लिन तपाईं मागे । केटा माथि बसे र मुस्कुराउँदै. ओह, फोल्डर, धन्यवाद । खुसीसाथ उहाँले कराए । उहाँले त्यसपछि क्रल अन्तर्गत तकिया र बाहिर झिकेर केही बिल. यो आफ्नो बुबा देखेर, बच्चा पहिले नै छ, पैसा छ, फेरि क्रोधित । एक बच्चा राख्नु सबै सँगै मुद्रा, र ध्यान दिएर गन्न बिल, र त्यसपछि देख्यो मा फिर्ता आफ्नो बुबा । तिमी किन पैसा चाहनुहुन्छ भने, तपाईं पहिले नै तिनीहरूलाई छ । को एक छ । किनभने म पर्याप्त थियो । तर अब म बस पर्याप्त, जवाफ दिए बच्चा छ । बाबु, यहाँ ठीक पाँच सय ।
← च्याट च्याट अनियमित
हिज्जे से. प्राप्त गर्न थाहा पाउन र से. गर्न वरिपरि आफ्नो बाटो पत्ता नेपाली, भाषा,) →